Dash Core Wallet: Rakibidda iyo Adeegsiga Jeebka Dash Iyo Inbadan! | Laga soo bilaabo Linux
Qeybtaan seddexaad, iyo hada daabacaadii ugu dambeysay, ee ku saabsan Wallets Cryptocurrency Lagu rakibayo nidaamyo hawlgal oo bilaash ah oo furan kuna saleysan GNU / Linux, inta badan waxaan ka hadli doonaa "Dash Core Wallet" Ka dibna qaar kale oo caan ah oo loo yaqaan oo ay adeegsadeen dad badan.
Kuwa aan inta badan aqoon u lahayn adduunka Cryptocurrencies, waxaa xusid mudan in, "Dash Core Wallet" waa Jeebka rasmiga ah oo ka mid ah Dash cryptocurrency, waxaana soo saaray oo toos u keenay Ururka Dash.
Maanta waxaan dooranay inaan diirada saarno "Dash Core Wallet", tan iyo, dhawaanahan waxaan sameynay daabacaad gebi ahaanba loogu talagalay "Wallet Cryptos" saraakiisha caanka ah Lacag-bixinta wac "Dogecoin". Sababta sababta, kuwa xiiseynaya mowduucyadan, waxaan uga tagneynaa hoosta iskuxiraha daabacaadii hore iyo tan 2 ee midkan ka horreysa, ee la xiriirta Soo dejiso, rakib oo isticmaal oo kala duwan "Wallet Cryptos".
1 Dash Core Wallet: Boorsada Rasmiga ah ee loo yaqaan 'Crypto Wallet'
1.1 Waa maxay Dash?
1.2 Waa maxay Dash Core Wallet?
1.4 Boorsooyinka kale ee loo yaqaan 'crypto'
1.4.2 Gnosis Ammaan ah
1.4.3 Keydso jeebka 'Crypto'
1.5 Kudar Wallet-ka Qalabka
1.5.1 Walxaha Qalabka Ledger
1.5.2 Walletka Qalabka Trezor
Dash Core Wallet: Boorsada Rasmiga ah ee loo yaqaan 'Crypto Wallet'
Waa maxay Dash?
In hab aad loo soo koobay oo fudud, sida ay Papel Blanco (Whitepaper) Isbaanish, sarkaalka Dash cryptocurrency, waa:
"Cryptocurrency ku saleysan Bitcoin, shaqada Satoshi Nakamoto, oo ka kooban horumarinno kala duwan, sida shabakad dhiirrigelin laba heer ah oo loo yaqaan 'Masternode network'. Wax ku biirinta kale ee lagu dhex daray waa PrivateSend, oo siineysa ficil kordhin, iyo InstantSend, oo sahleysa xaqiijinta deg-degga ah ee macaamil la'aanta iyada oo aan la helin maamul dhexe."
Xaqiiq kale oo muhiim ah in la muujiyo Dash, waa taas, waa mid caan ku ah (loo adeegsaday) gudaha Latin America oo si weyn looga yaqaan adduunka, sida a Lacagta qarsoodiga ah ee diirada lagu saaray sirta. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan waxaa laga heli karaa adiga degel rasmi ah.
Waa maxay Dash Core Wallet?
Sidaan horeyba u sheegnay, "Dash Core Wallet" es:
"Boorsada rasmiga ah ee 'Dash Cryptocurrency'. Waxayna siisaa dhammaan shaqooyinka Wallet iyo Macmiilka P2P (qof ilaa qof), oo ay ku jiraan howlaha maamulka ee barxaddeeda, sida: InstantSend, PrivateSend, Governance iyo Masternode."
"Dash Core Wallet" ayaa hadda laga heli karaa adiga version deggan 0.16.1.1, sida ku xusan iyada Websaydhka rasmiga ah ee GitHub. Si kastaba ha noqotee, soo degsigan, rakibidda iyo adeegsiga daraasadda, waxaan ka shaqeyn doonnaa nooca tijaabada ah 0.17.0 RC4.
Markaad soo dejiso oo aad furfurto faylka la heli karo ee la yiraahdo "Dashcore-0.17.0.0-rc3-i686-pc-Linux-gnu.tar.gz", waxaan u fureynaa terminal (konsole) sida isticmaale leh mudnaan ama xidid isla markaana aan ku dhaqaaqno fulinta feylkeeda la fulin karo ee loo yaqaan Dash-qt wadada "~ / Downloads / dashcore-0.17.0 / bin", sida soo socota "./Dash-qt".
Waxay u egtahay in, kuxirantahay GNU / Linux Distribution aad isticmaashay, waa inaad rakibtaa xirmooyin hore si looga fogaado khaladaadka Daraasadeena kiiska, waxaan u adeegsaneynaa a Respin (Sawir-qaad ah Live iyo Installable) caadada loo magacaabay Mucjisooyinka GNU / Linux taas oo salka ku haysa MX Linux.
Waana la dhisay iyadoo raacaysa kuweenna «Hagaha Snapshot MX Linux» iyo filaayo in Macdanta 'Crypto Assets Digital Mining', iyadoo la raacayo talooyin badan, kuwa lagu soo daray daabacaaddeenna oo la yiraahdo «U beddelo GNU / Linux nidaamkaaga hawlgalka ee ku habboon Macdanta Dijital ah».
Si kastaba ha noqotee, kuwan soo socdaa waa in la rakibo baakado dheeraad ah si loo saxo khaladaadka bilowga qaarkood, maadaama ay tahay gelinno 64 y "Dash Core Wallet" codsaday rakibo of 32-bit xirmo iyo maktabado:
Tallaabooyinkan ka dib, mar hore "Dash Core Wallet" wuxuu kubilaabmay dhibaato la'aan sida hoos ka muuqata:
Haddii ay dhacdo in aan la isticmaali karin "Dash Core Wallet", iskuday boorsooyin kale oo ay soo jeediyeen Ururka Dash si loo maareeyo ayaa yidhi hantida crypto.
Boorsooyinka kale ee loo yaqaan 'crypto'
Boorsooyinka kale ee loo yaqaan 'cryptocurrency' oo faa'iido leh oo caan ah, oo loo isticmaali karo GNU / Linux Waa kuwan soo socda:
Kaas oo bixiya feyl is dulfuulan, oo leh noocyo kala duwan oo fulin ah
Gnosis Ammaan ah
Maxaa bixiya a faylka ".AppImage".
Keydso jeebka 'Crypto'
Maxaa bixiya a faylka ".deb".
Kudar Wallet-ka Qalabka
Kuwa ugu waxtar badan uguna caansan, ee loo isticmaali karo GNU / Linux waa sida soo socota:
Walxaha Qalabka Ledger
Walletka Qalabka Trezor
Maaddaama ay awoodeen inay qiimeeyaan, Nidaamka Howlgalka GNU / Linux, waxay la mid yihiin ama ka fiican yihiin Windows o Mac OS, shaqadii Macdanta Dijital ah ama hawlo kale Defi.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan jeebka 'crypto' «Dash Core Wallet», taas oo ah Warqada rasmiga ah ee Dash cryptocurrency, iyo Boorsooyin kale, oo ay weheliso kaabayasha softiweer ee Wallets Hardware-ka caan ku ah, oo ku saabsan Nidaamyadeena Hawlgal ee bilaashka ah iyo kuwa furan; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Dash Core Wallet: Rakibidda iyo Adeegsiga Jeebka Dash Iyo Inbadan!
System76 horeyba waxay ugu shaqeysaa bay'ad desktop u gaar ah waxaana lagu magacaabaa COSMIC
Stallman wuu hadlay wuuna qirtay qaladaadka wuxuuna sharaxay isfaham waaga